Sonke ophilayo namuhla abantu abazalwa ngenkathi cinema ubuchwepheshe obusha. Manje asisekho Emangazwe yilo amafilimu izinhlobo ezihlukahlukene nomculo ndlela ehlukile.
Ngokwemvelo, amafilimu zihlukile. Okwamanje, kukhona inala kubo. Futhi wonke umuntu angakwazi ucinga ukuthi ingaphezu angayithandi. Futhi uma ngokungazelelwe kwenzeka ukuthi isikhathi esichithwa ifilimu, mayelana lapho bathi wayengumuntu "nhlobo", khona-ke nathi udumazeke. Kodwa, ngenhlanhla, kuyenzeka futhi okuphambene nalokho. Bonke abantu uthole injabulo enkulu uma ubuka i-movie, kusuka esingakwazi phuma, uyibuke ku umoya ofanayo, nangokuthandaza ngasese ukuthi sidonsa.
Omunye amaphrojekthi ezifana ifilimu angababaza kufanele kubhekwe Thriller ngokwengqondo "isicinganani". Abalingisi ekhethiwe ngokuphelele, futhi ngesakhiwo ithumba kusukela ngomzuzu wokuqala. umqondisi le filimu - Steven Soderbergh. Ngenxa amabhayisikobho akhe odumile njenge "Pleasantville," "Ocean sika Trilogy", "Solaris", "Knockout" kanye nabanye abaningi.
Kudlalwé "Effects Side" owawuse e-United States ekuqaleni Februwari 2013. Futhi ngaleso sikhathi, ekupheleni kwenyanga okufanayo eRussia. Isici ifilimu "isicinganani", abadlali abenza kuphela sekusaziwa yithi abantu, ngokushesha okubangelwa isiphepho omkhulu wokudlulisa imizwelo emhlabeni wonke futhi ithole abayithandayo yayo. Isiphi?
"Uhlangothi umphumela" - ifilimu ngokwengqondo. Uma kabi uthumele izinhlobo, kungcono ukugwema ukubukela. Kodwa ingabe zikhona izilaleli?
Ekuqaleni, ifilimu liqala ukusitshela ngo ukushada nendoda ogama layo Martin Taylor, owayesanda nje ngengozi ngemva kweminyaka emine yokuqeqeshelwa ejele. Ezinsukwini ezimbalwa ngemva kwalokho, umkayo Emily ngesivinini eshayisa udonga ukhonkolo, ukuzama ukuzibulala.
Ngokuyisimangaliso bophulwe abesifazane esibhedlela. Kube wamiswa wezifo zengqondo siqu Jonathan Banks, okuyinto uqaphe nokuphepha yayo futhi emva lokukholisa kakhulu namanje uyavuma basiyeka ekhaya, kuphela isimo ukuthi bazovakashela njalo kuye.
Ukuba wazama antidepressant eziningana, Dr. Amabhange baqonde ukuthi akekho kubona akusho isimo wentombi. Enethemba ukumsiza nganoma iyiphi indlela, ke sibopha ne udokotela wezengqondo wangaphambili Emily - Victoria. Lokho kubanika, ukhuthaza izidakamizwa entsha yokuhlola - "Abliksa".
Ekuqaleni, lo dokotela bangabaza kuwufanele ukubeka ukuphila kwentombazanyana, nabelane ke umuthi engahloliwe. Kodwa konke ukungabaza luzophela okwamanje lapho Emily ezama ukuzibulala futhi.
ematfuba elingalindelekile - into eyigugu kakhulu endabeni
Ikakhulukazi ukuthi sidakamizwa sisiza intombazane, ekugcineni siqala ukuphila ukuphila okuvamile. Okuwukuphela side effects ezilethwa izidakamizwa izimo ezingavamile somnambulism. Uma kwelinye lezo zikhathi Emily ubulala umyeni wakhe ngommese.
Ngesikhathi kuqhubeka leli cala udokotela wesifazane uzama ukukholisa kwejaji amajaji ngizigezelé ize yayo. Kodwa ngenxa abachitha umsebenzi wakhe ngenxa yokuthi wonke umuntu ucabanga sisole kwesigameko ke, njengoba kwakunjalo lapho - kudokotela eye yamisa umuthi oyingozi.
Owesifazane limenyezelwe udidekile ngokomqondo futhi afakwe esibhedlela sabagula ngengqondo, inqobo nje udokotela wezengqondo wakhe ayeliqamba enempilo. Naphezu kweqiniso lokuthi ukuphila kaJonathani aphazamisa, waba basazama ukuthola iqiniso. Yena kubiza eziningi umzamo ukuze uthole ukuthi konke okwakwenzekile Kwakuhlelwe ngokucophelela futhi ehambisana Victoria no-Emily. Nokho udokotela ehluleka ukuveza ubufakazi ezazinama- isimo sabo uma ibonakale sengathi i-serum iqiniso injected Emily-placebo. Yena ikufanele ukukhwabanisa Jonathan ubeka lonke iqiniso lokuphiliswa kwakhe.
Ngemva izinsolo okhethwe ukuba akuthumele izithombe umkakhe Victoria Jonathan incriminating, ibhekisela ubuhlobo komyeni wakhe no-Emily. Ngemva kwalokho, lowo mshado indoda ibhidliza, nomkakhe, ukuthatha indodana yakhe kude.
Udokotela, esebenzisa amandla akhe wezifo zengqondo, uvimbela khona yini ukuxhumana phakathi Emily Victoria, ngenkathi ukulungisa kubo ngokumelene nomunye. Emily uya kudokotela ukuxhumana amtshele iqiniso. Ngemva kokuboshwa umyeni wakhe, bamzonda, osho ukuthi ngoba washonelwa umuntu ocebile, ukuphila uhlala engenazinkathazo. Wabe eseyiyenga Victoria, ukuthuthukisa ubuhlobo bakhe.
Emily lifundisa intombi ulwazi zezimali, kubonakala umyeni wakhe, nokuthi esikhundleni efundisa wakhe ukuzenza uphazamisekile emqondweni. Female kuze kube manga nhlobo uhlangothi umphumela lesi sidakamizwa "Abliksy". Futhi uthole isizumbulu lungisa ngenxa ukuwa inkampani.
"Uhlangothi Effect": nabalingisi
Ekuqaleni, nendima female main e movie kwaba kumelwe ukufeza actress Bleyk Layvli. Kodwa ngenxa yezimo ezingaziwa, savele esephawula ukuthi uzothatha indawo Runi Mara.
Indima Dr. Jonathan Amabhange masterfully wenziwa umlingisi odumile Dzhud Lou. Owabe wezifo zengqondo Emily Victoria wadlala nomlingisi wesifazane owaziwa kakhulu Catherine Zeta-Jones. Futhi indima umkakhe Deirdre Jonathan Banks - actress Vinessa Shaw.
Kufinyeta bonke ngenhla, kuphephile ukuze ushayele le fil njengabakufanelekele ukuhlaziswa ngezikhathi ukubukeza ngokuphindaphindiwe. Kuphephile ukusho ukuthi i-movie "isicinganani" nabalingisi kudlalwa izindima zabo ngokuphelele. Lezi okudaliwe ngeke uthole nesithukuthezi. Futhi ngezinye izikhathi ufuna kabusha ukuphila nabalingiswa kakade izenzakalo ajwayelekile.
Owen Wilson: Filmography. Umkhaya kanye ne Career Hollywood umlingisi
"Ntambama Five" - okungcono Russian Soviet melodrama '70
Umlingisi Grant Tokhatyan: Biography, Filmography futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Izici Key Lenovo G50-30. Indlela ukufaka Windows 7 kule imodeli.
Ukudweba "iNsephe" ngezandla zakhe: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye nezincomo